संखुवासभा घटनाले लियो नयाँ मोड, प्रहरीको अनुसन्धान पनि फेरीयो – Sunaulo Nepal TV
काठमाडौ । सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका–१ खोलागाउँको उम्लिङमा भएको कार्की परिवारको घटनामा नयाँ मोड आएको छ । अहिले सम्मको अनुमान फेल भएपछि प्रहरीले नयाँ तरिकाले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको छ ।
Previous देशभर विद्यालय खोल्न हतार नगर्न अभिभावकको आग्रह,ठिक कि बेटिक ? कृपया आ -आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस् !
Next भरतमणिले नै जित्लान् त कमेडी च्याम्पियन ? आफ्नो गृह जिल्लामा भोट माग्दै हिडे भरतमणी पौडेल , गरियो भब्य स्वागत